China iAluminiyam yeDome iNtloko eyimfama iRivet enentloko enkulu kunye nabavelisi |Yuke
IAluminiyam yeDome Intloko eyimfama iRivet enentloko enkulu
Le mveliso ivulekileyo isiphelo esiyimfama rivet.Imveliso yethu ayinayo i-burrs.Intloko yesikhonkwane iphelele, igudile kwaye ithe tye.Umphumo we-riveting ulungile kwaye isakhiwo sihlangene.Imveliso iyakwazi ukumelana ne-corrosion, i-rustproof kwaye ihlala ixesha elide.Inoluhlu olubanzi lwezicelo.
Izinto: Umzimba weAluminiyam / Isiqu sentsimbi
UkuQeda komphezulu: Polish / Zinc Plated
Ububanzi: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3/16,1/4)
Yenzelwe wena: Customized
Umgangatho: IFI-114 kunye DIN 7337, Non-standard
Uhlobo lweNkampani Umenzi
Isicelo: I-elevator, ulwakhiwo, umhombiso, ifenitshala, ushishino.
Isakhono seMveliso: IiToni ezingama-500/ngenyanga
Uphawu lwentengiso: YUKE
Imvelaphi: WUXI China
Ulwimi: I-Remaches, i-Rebites
QC (ukuhlolwa kuyo yonke indawo) Ukuzijonga ngemveliso
Iqela lethu leenjineli elinamava linokuphuhlisa iimveliso kunye nokwenza ngokuhambelana neesampuli, imizobo okanye imibono kuphela.
1.Imibala eyahlukeneyo yee-rivets ezingaboniyo
2.Iintlobo ezahlukeneyo rivet eyimfama.kubandakanya isiphelo esivulekileyo intloko ejikelezayo, isiphelo esivulekileyo se-countersunk intloko, isiphelo esivulekileyo sentloko enkulu eyi-rivet eyimfama njalo njalo.
Ukupakisha kunye noThutho
Ezothutho : Ngolwandle okanye ngomoya
Immimiselo yokuhlawula: L/C, T/T, Western Union
Izibuko: Shanghai, China
Ixesha lokukhokhela : 15 ~ 20 Working Day for A 20' Container,5days ukuba une stock
Umqulu : 1. Ukupakishwa okuninzi: 20-25kgs kwibhokisi nganye)
2. Ibhokisi yombala omncinci,, ibhokisi yombala wedrowa ye-45degree, ibhokisi yefestile, i-polybag, i-blister.Ukupakishwa kabini kweqokobhe okanye njengemfuno yabathengi.
3. I-Assortment kwi-polybag okanye kwibhokisi yeplastiki.
I-YUKE inomthamo owomeleleyo wokuvelisa kwaye ithengisa izibophelelo ezisemgangathweni.Iimveliso zethu zihambelana nenkqubo yomgangatho wamazwe ngamazwe, efana ne-ANSI kunye ne-BS.
Inkampani yethu ibonelela ngezibophelelo ezikumgangatho ophezulu wobuchwephesha kwiinkalo zemizi-mveliso, ezifana nemoto, isakhiwo, unxibelelwano, i-electron, amandla, izixhobo zombane zasekhaya kunye nefenitshala, njl.njl. Kuyo yonke iminyaka yophuhliso, sinokuqinisekisa umgangatho ophezulu weemveliso zethu.
Wamkelekile ukubonisana, uthethathethwano kunye noku-odola zonke izibophelelo ezisuka koosomashishini kuwo onke amazwe, siya kubonelela ngazo zonke-imiyaleloInkonzo "yokuyeka ukuthenga ngokupheleleyo" yakho.
Ngaphambili: Dome Head Blind Rivet Steel Stainless
Okulandelayo: Intloko yentsimbi eyiDome eyimfama egcweleyo enentloko enkulu
I-Aluminiyam epheleleyo yeDome yentloko eyimfama iRivet
Countersunk Aluminiyam Pop Rivets Intshayelelo
vula isiphelo dome intloko aluminiyam steel iirivets blind
Vula i-End End Tubular Rivets
Intloko flat epheleleyo hex umzimba rivet nuts
Ii-Rivets ezivaliweyo zokuphela kweAluminiyam Rivet